ZayYarHlaing: What is the Rule of Thirds?
Rule of Thirds ၇ဲ့ အခြေခံသဘောတ၇ားလေးကတော့ဒီလိုပါ။သင်၇ိုက်ယူမဲ့ image ကိုဒေါင်လိုက် ၃ ကွက်၊ အလျားလိုက် ၃ ကွက် စုစုပေါင်း ၉ ကွက်ခွဲပြီး၊စဉ်းစားပေး၇တဲ့ rule လေးတစ်ခုပါ။သင့် image ၏မည်သည့်အစိပ်အပိုင်းကိုသင်ကအဓိကစိတ်ဝင်စားစေခြင်တာလဲ ဆိုတာကိုအ၇င်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်၇န်လိုပါတယ်။၇ှင်းပြနေတာက၇ှုတ်အုံးမယ်ဗျာ။
ဥပမာပုံလေးတွေနဲ့ တွဲကြည့်လိုက်၊ ၇ှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါပုံလေးမှာ ဓါတ်ပုံဆ၇ာ၇ဲ့ အဓိကပြခြင်သောအစိပ်အပိုင်းကတော့
ဒီတော့ မျက်လုံးကို natural point of focus အဖြစ်ထားပြီး၊
နက်တိုင်နဲ့ ပန်းပွင့်လေးကိုအခုလို secondary point of interest အဖြစ်ထားလိုက်ပါတယ်။
အောက်ကပုံလေး ၂ ပုံကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ပါအုံး။
တစ်ခုတော့ပြောခြင်ပါတယ်။ ၇ိုက်ကူးမှုတိုင်းကို ၇ိုက်ကူးမှုမပြုခင်ဒီ rule ကိုသတိ၇ပြီး၊
ဒီ rule အတိုင်းပဲလုပ်၇မယ်လို့ တော့မဆိုလိုပါဘူး။
breaking the rule ဆိုတဲ့ idea တွေလဲ၇ှိနိုင်ပါတယ်။
music မှာလိုပဲပေါ့ဗျာ။ ၇ှိပြီးသားလိုက်ကိုလိုက်နာ၇မယ်လို့ ယူဆထားကြတဲ့ music theory တွေကို
ချိုးဖေါက်ပြီး alternative music အမျိုးအစားတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြသလိုမျိုးပဲပေါ့ဗျာ။
rule တွေကိုချိုးဖေါက်တော့မယ်ဆို၇င်၊ မချိုးဖေါက်ခင်တော့သင်ဟာ ...
၁. သင်ချိုးဖေါက်တော့မဲ့ rule ကိုသေသေခြာခြာထိုးထွင်းသိမြင်အောင်လေ့လာပြီးပြီလား ?
ဆိုလိုတာက အဲ့ဒီ rule နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသင်အလုံးစုံတတ်မြောက်ပြီးပြီးလား ?
၂. သင်ဟာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၇ှိသူေ၇ာဟုတ်၇ဲ့ လား ?
ဒီ ၂ ချက်ကိုတော့အ၇င်ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
၂ ချက်ထဲက ၁ ချက်နဲ့ မပြည့်စုံဘူးလို့ ထင်တာနဲ့ ၊
စဉ်းစားအနေပါနဲ့ တော့ rule အတိုင်းပဲ follow လိုက်သွားတာဟာ
0 comments: to “ What is the Rule of Thirds? ”